Ukuvala i-plug ye-IEC yamagundane angena ngakwesokudla kufanelana nezikhala eziqinile - I-Electronic Components Distributor - Components-Store.com
Ikhaya > Izindaba > Ukuvala i-plug ye-IEC yamagundane angena ngakwesokudla kufanelana nezikhala eziqinile
Ingxenye yomndeni we-IL13 wenkampani "ngenxa yokwakhiwa kwayo engxenyeni ingasetshenziswa ngamadivayisi emi eduze nodonga noma ekusebenzeni kwezibhebhe eziphezulu," kusho le nkampani. "Zonke izinhlobo ziyasetshenziswa nanoma yikuphi ukufakwa kwe-IEC C14 ejwayelekile, ukukhiya ngaphandle kwemishini eyengeziwe."
Iza ngezinkambo ezine ukuya kumlingani okhululekile ngezinga eliphezulu, phansi, ngakwesobunxele noma kwesokudla kwesigaba sokulinganisa ne-chassis yayo.
Amandla okudonsa ngokuvamile a-200N, okwandisa ukuthembeka kokuxhumeka, ngisho nasezintweni zokusebenza ezisengozini yokudlidliza.
Kukhona izinhlobonhlobo ezihlanganisiwe zokuhlanganiswa kwekhebuli-connector, kanye nomxhumeko ongenawo ucingo weklabhu yangokwezifiso - isixhumi esivuselelekayo sinezinguqulo ezimbili kuphela: eziqondile futhi ezizungezile.
Izintambo kanye nezixhumi zinemvume ye-UL CSA, i-PSE, i-Kema Keur, i-PSE ne-SAA yokuphepha, futhi iyahambisana nomyalelo we-RoHS II (2015/863) futhi unikeza i-zero-halogen engezansi (LSZH).